Wayyanen Mormitoota biyya keessa daadhabsistee Paarlamaa keessa ari’ate erga qoofa isaa siirna biyyatti dhunfate booda tarkanfiin lamfa Diaspora fi Haawwasa biyya ala isaan mormuu facasuu fi wal dura dhaabuuf Dabbaloota fi SPY kumaa ol adunya irra facasun isaa ni beekama. Gummiin Paarlaamaa Oromoo yeroo bayee akkekachisa media hunda dabarsee jira
Dhaabbilee Siyyasa keessatu QINJITIn akka Shunkurti erga ququncaftee baleesite booda ABO cacabsuu saganta isaa gudaa xumuratee jirti. Kan ishee hafe Diaspora balleesu ykn of jala galchuu boba'aa gudda gochuu ishee waltajii arganee hunda fi Media hunda irratti ibsa ture. Namoon heedun gura nu hin lanee hara garuu waan of eegannoo lacha ture sun Wayyanen hojii irra olchitee argina. Dhaabbilee fi Diasporan garu utuu itti himamuu harka wayyanetti kufun nama gadisisa.
Boba'aa wayyane kun bara 2007 kasse namoota VIP visadhan kan biyya ba’aan yamuu ta’u erga biyya alaa ga’aan booda Kezei kenamefin akka baqqatootii harka kenan hojii baasasaa hojeetu kan immo akka baratoota scholarship ergaman baracha diaspora basaasuu. Dhimma kana kan hordofu Diaspora Directorati jeechun Department guda tokko Ministera ala keessatti saquun Bajeeta Milioona heedu ramaduufin socha’aa turan socho’asi jiru. Erga ba’aan booda SPY kun mal goocha turan?;
Dhabbilee siyyassa hunda keessatti miseensaa fi actvisti ta’uun keessa ta’aan hojeechuu egalan,
Haawwasaa biyya ala hunda bakka adda addaatti akka faca’uu goodhan, Targeti guddan Haawwassa Oromoo facasuu ture ABO mada galii cufuuf heedu hojeetan,
Bqatoota Ethiopia keessatu Baqatoota Oromoo Targeti goochun irratti hojeeta turan keesumatti Baqatoota Siyyassa Keniya, Sudan fi Djibuoti irra Qaban deebsuun mana hidhatti guuran isaa kan immo biyyuma sunti soodachisan ofti debsuun SPY godhatan.
Baqatoon Oromoo siyyasa heedun bakka itti baqatan fi gara ABOti c’ee’uu ykn galuuf Yemen kara dha jeedhamee waan yaadamuuf Ethiopian Yemen irratti mallaqa gudda dhangalasun, Mootumma Yemen, Militery fi Police Yemen Mallaqan qabachuun, UNHCR keessa ilee namoota Yemen hunda qabachuun Baqatoota Oromoo irratti bara 2011 kassan wagga 1 fi walaka dulla irratti goochun ajeesisuu, Da’iman wagga 3 fi dubartoota jarasa Oromo utuu hin hafin Dirqisisan guddeedun (Rape) goochisisun, Mana hidha tokko keessa namoota Kuma heedu Bishan fi Midhan Malee mana fincani malee dararaman biyya Ethiopiatti dirqin akka galan goodhaman. Kan hin galuu jeedhan utuu gara Sauditi Milan deeman Kara irratti qallaman Onnee, Tiruu fi Ija isaani keessa basan arrabi gurgurate. Dubartoon fi Dardaarii Oromoo heedun dirqisifaman erga gudeedaman booda abidan gubaman ajeefaman awalcha malee hafan.
Sagantan dulla Dasipora irratti baname kun barana immoo Caaraa sa’udiin banteen TPLF fayyadamun mal akka goote gababatti ibsun isaa kan qooratoota seenaaf dhifna. Sauid Arbia Hojeeta seeran ala biyya ishee galan basuuf ibsaa bafteen mootummoota biyya hunda marsiiftee wali galteen murteesu ishee ibsitee jirti. Biyyoolee heedun namoota biyya isaan kara seera kabajan akka biyya isaantti deebi’an, qeebeenyi isaan qaban akka hin xuqamnee, enyuman isaan fi naggenyi isaan akka egamuu, qabeenyaa qaban fudhatan akka ba’aan yeroo wali galte mallateesisan. Ethiopian garuu wa’ee lammi isheetti ba’uu haala dure tokko ilee utuu hin ka’iin of isheeti ilee baqatoota kaanaf utuu kara isaan itti ba’aan haalaa hin mijeesinif caalifte akka Saudin arituu fi bakka isaan immoo namoota haraa erguuf wali galuu ishee Saudin ibstee jirti. Sa’uditi maltuu goodhamee?
Nammota kara deeman hojii irra jiran mana daldaalla (suqii) isaan keessa hojeeta jiran qaban utuu waan tokko harkatti hin fudhatiin mana hidhatti darban,
Darggagoota Saudi gurmessan itti bobasun mana nama keessa bobasuun dhiira hunda qaban mana hidhatti erga darban booda dubartoota fi da’iman manati hafaan dirqisisan gudeeduu fi itti xabachuun dararan,
Namoon biyya ala kun bakka Qacaraman hojeetan mallaqa jaruma biratti waan kuufacha turan hunda dhorkaman ari’aman,
Namoon Maqa Araboota Konkoolata gurguda bitatan ittin hojeetan fi Maqa Araban mana daldaalla (Suqi) banatani ittin hojeetan Arboon gannan ofi irra ari’an,
Waluma galatti Qabeenya isaan hunda samaman, ni ajeefaman, ni reebama, dirqisfaman gudeedaman, Bishan fi Midhan malee hidhaman, biyya isaantti nama galchu daban guyya Onnge fi Galgala Qoora bakkee keessatti hidhaman. Mootmmaa isaaf iyyatu dhaban lamiilen Ethiopia Milloon 90 iyyachuufif mirga dhabee caalisuuf dirqame. Haawwssi ala jiru akka hin iyyanee durasamee waan digameef TPLF mo’ichan xumurtee, garu seena badiisa ishee babaliftee.
Walummagalati Sauditti lammi Oromoo fi Ethiopia irratti waan dhala namaafi hin malee hundatu irratti raawwatamee.
Ethiopian yaakka akkas malif lamii ishee irratti hojeete kan jeedhu gaafi hunda namatti deebin isaa Ethiopian rakkoo lammii irra ga’uu kana irraa bu’aa siyyassa kana gadii argachuuf gaga'am lammii ishee irratti goodhamuu akka nama hin dhageenye caaliftee ilaalaa turte.
Nammoon kun siirna wayyanee baqqatani kan karaa adda addaa Sauidi galan fi ajajja waayan kan hin fudhane fi Bond Abayi Wayyanen gurgurtu kan bituu didan waan ta’anf ari’amuu fi dararamuu isaan irra bu’aa siyyassa argati, kara birra immoo Moorimiitoota bu’aa fi deggersa isaani baqatoota kana irra argatan irra kutuuf,
Sagaleen keenya Haadhaga’amuu kan jeedhu mormii Musilima biyya keessa Saudi Arabiya fi Namoota kanatu deggera jeechun madda deggersa kana cuufuf yaala jiran,
Ajeechaa, Darara fi samiichi namoota Saudi Arabiyan Lammii Oromoo fi Ethiopia irra ga’een Musilmin achii dararamee qabeenya isaa dhabee galuu kun utuu hin jalatiin Musilima Sunni Saudi jibee AlHabasha (Musilma TPLF ijarte) akka deggeruuf waan dirqamuuf wayyanen bu’aa guda irra argati yeroo tokkotti Musilma biyya sauditti galu irra deggersa musilima kuma 40 ol argati kara birra musilima Sunni jibisifti.
Walmuagalati Saudi Arabiyan lammi isheef hojii banuuf jeecha lammii Ethiopia biyya ari’uuf murteesun waayaneef caaraa gudda baneef jira. Wayyanen gidiira lammi Ethiopia irra ga’uuf denta waan hin qabneef ajjeecha lamii kana caaraa fi da’oo goodhatee danta siyyasaa ishee itti argatee jirt. Wayyanee Danta fi Mallaqa bakka jiru keessa hin dhabamtuu, Danta argachuuf immoo cubuu hunda dalaguu irra dubatti hin deebitu. Wayyanen Angoo qabatee wagga 23 booda ilee akkuma yeroo bosona turte Uummataa Ethiopia akka diina hamati ilaaltti malee akka uummataa bulcha jijrtuti hin ilaaltuu.
Wayyanen erga balan kun ga’ee ilee lubu lamii kana bararuu dhiiftee soba fi olola facasuun, lammii dararama jirutti qoosun, yaakaa ishee gaafachisuu heedu dallaga jirti.
Mummichi Ministera H/Mariyam Dasalenyi Lammi kana irra balan ga’aa jiru akka dhabatuuf mediati ba’ee, xalayaa Mootummaa Sa’udtti barreesun ykn Bilibilan lubu lammii kana hanbisuuf hin caraqine;
Minister dhimma ala gara Sauditi deemun qaman Mootumma Saudi dubsuun furmataa hin barbaneef;
Minister dhimma ala Ethiopia Ambassadara Saudi Ethiopia jiru waamee of eganoo itti lachun lammii Ethiopia Saudi jiran akka hin xuqamnee goochuu hin yaalee;
Lammiin kuma40 ti tilmamamuu rakkoo irra jirachuu erga hubatee boodasi lamiin kun akka biyyatti deebi’an xiyyara fi dooni qabuu gara biyya sunti hin erginee,
Nammoota mana hidha Saudi keessatti qabaman jiran fi biyyatti galuuf galma’an kumi 23 jirachuu erga beeke UHNCR, IOM, Red cros international fi kkf deggersaa gaafachuun lammiin kun akka biyyatti deebi’an hin gone,
6. Embassy Ethiopia Saudi jiru Mootummaa biyya sanati iyyachuun lammii isaa dura reebicha fi ajeechaa irra olchuu hin dandeenye, kana malee ammoo akka isaan rakko hin qabnee bakka Bashanantti kuununfamaa akka jiranti VOA irratti ibsa akkasi lachuun yaakka,
Qabxiilee kana oltti caqasaman kun kan nuuf ibsuu Mootumman Ethiopia dararama lammii Oromoo fi Ethiopia irra biyya Sauditti ga’ee harka kan keessa qabuu qoofa utuu hin tanee dararamii kun ga’uun feedha isaa ta’uu mulisa. Mootummaa badisa uummataa isaatti barbaduu imoo ofi isaatti baduun isaa hin oluu. Wayyaneen danta inni argachuuf jeecha da’iman , dubartoota fi jarsooli irratti yaakaa dalgisisee kun samuu Uummata keessa yoomi ilee hin baduu, kun ammoo yakka TPLF gaafa tokko ittin gaafatamuu keessa isaa tokko. Wayyaneen yaakka ittin ittigaafatamuu ofuma isaati tolfata jira. Siirni waaynee ciimmina mormiitootan kan kufuu utuu hin tanee yakka ofi dalagun Ofuma isaatiin of takklee of kufisa.
Sadaasa bara 2013